Ukuqeqeshwa kwi-Odorless Maggot Cultivation kwisiXeko sase99 • Yurie BSF
Ukuqeqeshwa kwi-Odorless Maggot Cultivation kwisiXeko sase99
Yurie | Feb 16, 2019 | Ukuqeqeshwa kweMaggot okungafunekiyo
Uqeqesho ++ Uhlobo lwe-BSF lwangoku ngaphandle koQeqesho lweOdor
I-BSF ukulima okungenasiphelo samanje kukuphela koqeqesho lokuqeqesha ++. eqinisekisa ukuba uphumelele. Bonke abaqeqeshi boqeqesho ++ boqeqesho ukulima umlingo Ungayilanda ngokusebenzisa isicelo se-Yurie BSF kwi-PlayStore. Uqeqesho lwezolimo lwe-BSF kunye no-Yurie BSF Unokukhetha indawo ekufutshane yokusebenza kuyo kwisixeko sakho. Ngenxa yo qeqesho Inkomo zeMaggot ++ Unelungelo lokuziqhuba kwiifama ze-Yurie ze-BSF zisasaza kwiidolophu ezininzi kwi-99 kulo lonke elase-Indonesia. Uqeqesho lwezilwanyana lwe-BSF olungenasiphelo kwaye luye lwavavanywa ngempumelelo.
Khuphela i-Yurie BSF Isicelo
Inkqubo yoQeqesho lweMaggot ye-Odorless
Ukuqala ukusuka kuwe kubhalisa
Emva koko uya kunikwa ukufikelela kwisicelo se-Yurie BSF kwi-PlayStore
Uya kwamenywa ukuba ungene kwiqela eliyimfihlo le-FB nenkcubeko yanamhlanje ngaphandle kovumba
Ukuhanjiswa kweempahla ekusebenzeni kuyathunyelwa iiyure eziyi-2x24 emva kokubhaliswa
Ukunikezelwa kwembewu, amaqanda amaqabunga ayahlengahlengiswa ngokulungelelanisa
Unelungelo lokwenza intsimi kwenye yeefama ze-Yurie BSF
Isikhokelo emva kokusebenza kwintsimi senziwa kuze kube yilapho uphumelela
Ngaphambi kokujoyina, kufuneka ubhaliswe ngokuthumela ubungqina bentlawulo kwiimali zoqeqesho nge-BRI yokutshintshwa kwebhanki.
Kwaye uza kucelwa ikhophi yekhadi le-ID njengamarekhodi olawulo.
U-Yurie BSF Isicelo sokuFikelela
Emva kokuthumela ubungqina bokudluliselwa, uya kufumana iphasiwedi ekhethekileyo ukuvula isicelo seYuroe BSF kwindawo yokudlala.
Kwisicelo se-Yurie BSF i-playstore isilungiselelwe:
Izikhokelo ezintathu zezifundo kunye nezenzo
I-Tutorial yokulima okungenasiphelo
I-Formula yenza i-maggot pasta
Ukusetyenziswa kwesichumisi se-organic fertilizer (POC) umququ kwiiqabana ezahlukeneyo kunye neziqhamo zityalo
Ukusetyenziswa okuchanekileyo kwesichumiso esilungileyo somququzeleli
Emva kokufumana ukhiye wephasiwedi, kufuneka uvula, ukhuphela kwaye ubukele ividiyo esebenza kuyo naluphi ixesha elide kuba kukho uxhumano lwe-intanethi.
Isicelo se-Yurie BSF sikhulu kakhulu kuba kukho amavidiyo amaninzi kunye namaxwebhu kuyo, kodwa ngobugcisa obuphambili, umphumo wesicelo ukhanya kakhulu kwi-16MB.
Silungiselele esi sikhungo esiphezulu ukuze isicelo se-Yurie BSF singalandwa ngolo hlobo lwefowuni lomdala.
Joyina iqela eliyimfihlo
Isinyathelo sakho esilandelayo siya kumenywa ngokukodwa ukuba ungene kwiqela le-fb leemfihlelo zolimo lwe-BSF namhlanje ngaphandle kovumba.
Kwi-FB iqela elifihlakeleyo lokulima kwe-BSF namhlanje ngaphandle kokuvumba kuhlulwe ngamanqanaba amathathu, oko kukuthi
Kule qela uza kuhlangana nabo bonke abahlobo bakaYuroe BSF kulo lonke elase-Indonesia. Bawabelana ngamava abo kwaye babumba uluntu kwizixeko zabo.
Kucelwa uxubushe nge-adab ehloniphekileyo. Siza kusebenza ngokuthe ngqo kwiintlanzi "zokuxhaphaza" ezingekho ndawo kunye nezinto ezingenanto eyenzayo kwimigudu yokulima ngokuphumelelayo BSF ngevumba.
Le nqanaba le nqanaba ijolise ukwenza bonke abahlobo bakaYuroe BSF bajolise ngakumbi kwimisebenzi yemihla ngemihla yokuhlakulela umququ.
Kwinqanaba ngalinye uya kukhokelwa ngumcebisi omnye okanye ababini abaphumelele. Ngoko oko kuhanjiswa ngumphumo wesenzo akuyiliso lephene.
Kwiphakheji nganye ethengiweyo, uya kunikelwa ngempahla yakho ngokwakho ekhaya kuquka imbewu, amaqanda, larva nezinye izixhobo ezixhasayo.
Le phakheji iyahlula kwiindidi ezimbini, izinto ezingapheliyo nezinto eziphilayo. Iindidi ezingapheliyo ziya kuthunyelwa ii-2 x ii-24 iiyure emva kokufumana ubungqina bokudluliselwa,
Iintlobo zezinto eziphilayo ezifana nembewu, amaqanda, izibungu njl. Ziza kuthunyelwa ngokuzilungiselela kwakho. Oku kuhloswe ukwenzela ukuba izinto eziphilayo zifunyenwe emva kokuba ukulungela kuphelile.
Ubungqina bokuhanjiswa kweempahla kwi-courier service esiyikhethayo kwifom yeirisithi oyifumanayo ukuba ukhangele ukuba yeyiphi indawo yokuthumela.
Emva kokukwazi ukukhuphela isicelo kwaye ufunde ngokwakho udibanise iqela, kufuneka ufunde ukuzisebenzisa ngokuthe ngqo kwiifama ze-Yurie BSF ezisasazeka ngaphezu kweedolophu ze-99 kulo lonke elase-Indonesia.
Uya kuqhutyelwa ibhokhwe ngumcebisi osele uqeqeshiwe kwaye ufumana isatifikethi sokulima kwe-BSF yanamhlanje ngaphandle kovumba. Ngoko uya kufunda into efanayo.
Oku kunenzuzo kuwe ukuba usebenzise ngokuthe ngqo kwisixeko esiseduze. Ngenxa yokuba umgama usondele, awudingi ukuhlawula iindleko ezinkulu zothutho, amathikithi okuhamba, iindleko zokuhlala kunye nexesha nazo ziguquguqukayo.
Izahlulo zophando 10 km25 km50 km100 km200 km500 km
Emva kwenkqubo ekhankanywe ngasentla, uya kuhlala ufumana ukhokelo kuze kusebenze.
Umtshini wakho uya kuthengwa nguYurie BSf kwiRp7.000 / kg. Ngoko akukho mfuneko yokukhathazeka ngokukhangela ukuthengisa kwakhona.
Kodwa ukuba awufuni ukuthengisa ku-Yurie akukhathaleki nokuba. Ukhululekile ukugqiba apho ufuna ukuya khona thengisa umlingo- i-bug.
Phuhliso lo shishino
Ngokukhawuleza okanye emva koko umsebenzi wokulima umlingo ongenasiphelo uvelisa amaninzi amaninzi. Ukuba uthengisa umgudu ku-Yurie BSF.
Sinike inkxaso yengxowa-mali yomngane weRp100.000.000, - ukuphuhlisa imveliso yemaggot.
Unokubonisana ngqo nabacebisi beengcali
Ukufunda okudibeneyo ekuqeqesheni kunye nokungaxhunyiwe kwi-intanethi (ukusetyenziswa kwintsimi) kunokuba nanini naphi na apho uthanda khona. Unokukhuphela umxholo wesifundo.
Indlela yokulima yamaggot ayihlolwe ngempumelelo kwaye iyanandipha ngamawaka kahlobo lwe-Yurie BSF
Izinto zokulima zihlala zihlaziywa njengoko zifunekayo
Ukuxabisa ukusuka kubafundi abaqeqeshwayo kubafundi kwiindlela zobungqina bobugqwetha kunye nobubungqina bokwenene obungabona LIVE kwisiteshi se-YouTube u-Yurie BSF.
Iyintoni intengo yephakheji yoqeqesho?
Uqeqesho lwe-+++ aluhlawuli okanye lukhululekile, yonke into oyihlawulayo ipakethe. Ixabiso leendawo zokupakisha ukusuka kwiRp100.000-Rp4.000.000 kuxhomekeke kwiphakhethi oyikhethayo.
Ngaba kufanelekile kubaqalayo?
Efanelekileyo kakhulu. Ngenxa yokuba isicatshulwa seencwadi kunye neevidiyo zokufundisa zenziwa kancane kancane ukusuka kwi-zero ukuphumelela. Kufuneka ukhethe uqeqesho lwe-e + training ++ njengoko kufuneka.
Ngaba zonke iintlawulo zingenziwa kanye?
Nombolo. Iipakethi zeempahla ezithengiweyo zihambelana nokujoliswa kwento othengayo
Ngaba isifundo sinokukhutshwa?
Ewe, unokukhuphela umxube wexwebhu.
Joyina ngoku kunye nezinye ze-2000 ++!
Xhagamshelana nathi / WA 0812-2105-2808
Ukubulisa UKUKHUBA NOKUKHULULELA KWAMI INDONESIAN
Ukwandisa ukuveliswa kweCatfish namaProbiotics
Yenza i-5-7 Usuku lokuzondla i-Catfish
Indlela yokwenza ukutya kwamuva kwe-2019 catfish
I-BSF izikhuni kunye ne-oil palm pulp ye-catfish feed
I-Coconut Dregs kunye ne-Tofu Dregs kunye ne-EM4
mfono: fax: email: